Wararka Enterprise |
Annagu kaliya ma nihin soosaaraha shaashadda LED-ka
Waxaa jirta oraah hore oo Shiineys ah: Macaamiil waa boqorka, taas oo macnaheedu yahay adiga ayaa noogu qaalisan. Xaaladdan oo kale, waa inaan si sax ah u dalbano nafteena. Shaqadayada kaliya maahan inaan soo saarno guddiga hogaaminaya laakiin sidoo kale inaan ku siino xal mashruuc wanaagsan. Tusaale ahaan, waxaan helnay ord ...
Gaarsiinta Shaashadaha Lubnaan Laydhka
Gaarsiinta shaashadaha Lubnaan Laydh Bishii Diseembar, waxaan u geynnaa Lubnaan Soo-bandhigyada Lubnaan. Derbiyadeena LED-yadu waa kuwo tayo sare leh, waxaanan bixinnaa dammaanad 2 sano ah. Waxaan leenahay Xakamaynta Tayada adag: Waxaan tijaabineynaa talaabo kasta oo wax soo saar ah (tijaabin iyo gabow loogu talagalay Module-ka - Golaha wasiirada LED-ka ama guddiga LED-ka ...
Gaarsiinta loogu talagalay Soo-bandhigida LED-ka ee Thailand
Gaarsiinta Display-ka Thailand ee Display Disember, waxaan u geynnaa Walls-ka Video-ga ah Bangkok, Thailand. Derbiyadeena LED-yadu waa kuwo tayo sare leh, waxaanan bixinnaa dammaanad 2 sano ah. Waxaan leenahay Xakamaynta Tayada adag: Waxaan tijaabineynaa talaabo kasta oo wax soo saar ah (tijaabin iyo gabow loogu talagalay Module-ka LED-ka ama golaha LED-ka ...
Gaarsiinta Shaashada Shaashada Tayada Sare ee Slovenia LED
Bixinta loogu talagalay Shaashadda Shaashadda Tayada Sare ee Slovenia LED Bishii Nofeembar, waxaan u geyn doonnaa Iskuduwaha Muuqaalka LED-ka Slovenia. Shaashadeena Video-ga ee 'LED Video Screens' waa kuwo tayo sare leh, waxaanan bixinnaa dammaanad qaad ah 2 sano. Waxaan leenahay Xakamaynta Tayada adag: Waxaan tijaabineynaa tallaabo kasta oo wax soo saar ah (tijaabin iyo gabow loogu talagalay Modul-ka LED-ka ...
Macaamiisha ka socda Thailand waxay booqdeen warshaddeena Soo-bandhigyada LED-ka Oktoobar 16-keedii
Bishii Oktoobar 16-keedii (Talaadadii), macmiilkeenna ka yimid Thailand wuxuu booqasho ku soo maray warshaddeenna. Waxay aad uga hadlaan safarka warshadda; Guddiyadeena Muuqaalka ee 'LED Display Panels' iyo adeegeena oo ay weheliso Xirfadleena waxay ku guuleysteen aqoonsigooda iyo kalsoonidooda Waxay ii keeneen cunno fudud oo gaar ah oo Thailand ah, oo aan qabsado ...
Macaamiisha ka socda Chile waxay booqdeen warshaddeena Pantallas LED bishii Sebtember 26th
Bishii Sebtember 26, macmiilkeenna ka socda Chile ayaa booqasho ku soo maray warshaddeenna. Waxay bixiyeen faragelin badan Pantallas LED Publicidad para Exteriores (Bannaanka Xayeysiinta Dibedda ee LED) 10m * 3m iyo 4m * 3m. Inta lagu guda jiro booqashada warshadda, waxaan ka wada hadalnaa su'aalo badan oo ay daneynayaan faahfaahinta. Daraasad kadib ...
Macaamiil ka socda Chile ayaa booqday wejigeenna (ee loogu talagalay Pantallas de LEDs) intii lagu jiray 24-kii illaa 29-kii Maajo
Intii lagu guda jiray 24-kii illaa 29-kii Maajo, macmiilkeenna ka yimid Chile ayaa booqasho ku soo maray warshaddeenna. Waxay ku bixiyeen faragelin badan Pantallas LED (Shaashadda Muuqaalka LED) 6m * 4m. Waxay aad uga hadlaan safarka warshadda; alaabtayada iyo adeegeena oo ay weheliso Xirfadleena waxay ku guuleysteen aqoonsigooda iyo kalsoonidooda. An ...
Macaamiilkeenna ka yimid Talyaaniga ayaa booqasho ku soo booqday warshaddeenna 27-kii Juun
27-kii Luulyo (Arbaco), ayaa macmiilkeenna ka yimid dalka Talyaaniga wuxuu booqasho ku soo booqday warshaddeenna. Waxaan soo bandhignay dhamaan dhinacyada laxiriira kormeerayaasheena LED-yada / Shaashadaha LED-ka, sida: habka wax soosaarka sida muuqaalka LED-ka uu u shaqeeyo sida loo xakameeyo sida loo rakibo sida loo dayactiro sida barnaamijka loo sameeyo - Soosaarahayaga otomatiga ah ...